Malunga nathi - i-Wonderful Enterprise Co., Ltd.
Wonderful lweshishini Co., Ltd. uye phambili umoya wobugcisa. Isebenze nzima kolu hlulo lokwahlulahlula iminyaka emininzi. Iseke amajelo amaninzi emveliso, unikezelo, kunye nentengiso, kwaye inentengiso eyomeleleyo kunye noyilo lweR & D yeqela elizimeleyo. Ezona nkampani ziphambili "nguIshine" kunye "neon glo", ezinegama elihle kwiimarike zaseYurophu nezaseMelika kwaye zihlala kwisabelo esikhulu semarike. Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yokufumba, inkampani iye ephethe amalungelo awodwa omenzi wechiza phantse-20 iimilo ezintsha ebonakalayo kunye nokubonakala e-China nase-United States; ivelise uluhlu olubanzi lweemveliso ezikhanyayo kunye noluhlu olubanzi lwemigca yemveliso kubathengi kwihlabathi liphela.
Wonderful enterprise Co., Ltd. has its own factory, which was established in 2006. Umzi-mveliso awunayo kuphela inkqubo yayo epheleleyo kunye nesayensi yolawulo lomgangatho, kodwa ikwanakho nokwakha umzi-mveliso kunye nezixhobo zemveliso eziphambili. Umzi-mveliso ungaphezulu kwe-4000 yeemitha zesikwere sendawo yemveliso esemgangathweni, eyayo i-R & D kunye neqela lemveliso, imigca yokuvelisa eyi-7, kunye nabasebenzi abangaphezulu kwe-100. Sele sidlulile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO 9001 kunye nokuhlolwa kwefektri kwe-ICTI, BSCI, kunye nokuqinisekiswa kwesiqinisekiso seWCA. ibeke isiseko esomeleleyo kunye nesiqinisekiso se-OEM kunye neeprojekthi zokwenziwa ngokwezifiso zabathengi kwihlabathi liphela. Inkampani ineminyaka emininzi yokusebenzisana kweshishini kunye namashishini adumileyo kwihlabathi liphela, kubandakanya iDisney, iCoco-Cola, iWalmart, umthi wedola, iCVS, iAuchan Auchan, iCarrefour, njl.
INDALO YOKUSETYENZISWA KOMASIFUNDISANE
Umsebenzi wenkampani kukwenza ulonwabo, ukukhulisa abasebenzi, kunye nokubuyisela eluntwini. Ngemveliso yethu ekumgangatho ophezulu, inkonzo ebalaseleyo, kunye nexabiso lokuzisa ulonwabo kubo bonke abasebenzisi!
Inkampani ayisiyomthengisi kuphela weemveliso ezikhuselekileyo nezikumgangatho ophezulu kodwa ikwangumthumeli ngaphandle wenkcubeko ekhanyayo. Iimveliso zethu ezikhanyayo zinokuba ngamaqabane amakhulu amaqela, kwaye zenze imeko entle neyonwabileyo ukuze abantu bahlale bekhumbula olo hlobo lokonwaba kuwo wonke umzuzu obalulekileyo kunye nobomi!